चलचित्र/मनोरञ्जन – Page2– Nagarik Today
नेपाली चलचित्रका नायक नायिकाले लोकगीतलाई बिर्सन हुन्न – बैकुण्ठ महत
काठमाण्डौं ३ मङ्सीर । नेपाली लोक गायनको क्षेत्रमा चर्चित गायक बैकुण्ठ महत यती बेला छैठौं पृथ्वी राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड २०७५ को सर्वउत्कृष्ट परम्परागत गीतको मनोनयनमा परेका छन । उनको देउडा भाकाको 'लैझा रुमाल' बोलको गीत मनोनयनमा परेको हो । मनोनयन पछी खुशी ब्यक्त गर्दै नियात्रा टि.भी को टिम सँग गरिएको कुराकानीको अंश :- ﻿ can mobic get you high.
भारतिय संगीत क्षेत्रमा नेपाली चेली मेनुकाको जादु
काठमाण्डौ ३ मङ्सिर । आफुसंग भएका प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने क्रममा भारतको चर्चित रियालिटि सो सारेगमपको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली चेलीले सहभागीता जनाएकी छिन । मेनुका पौडल जस्को नामै काफि छ, सुमधुर आवाजकी धनी गायिका । buy vasotec valeant pharmaceuticals. आइतबार मेनुकाले ‘पिया बावरी’ बोलको गीत गाएर तहल्का मच्चाएकी छिन ।मेनुकाले सो गीत गाउँदा भारतीय संगीत क्षेत्रका हस्तीहरु तथा जजहरु मन्त्रमुग्ध भएका थिए । मेनुकाको स्वरमा जादू रहेको जजहरुको प्रतिक्रिया थियो । यो सँगै मेनुका मेगा राउण्डको टप तेह्रमा पुग्न सफल पनि भएकी छन् । मेनुकालाई जुरी मेम्बरले ९९ दशमलब ३ अंक दिएका थिए । कार्यक्रमकी अतिथि भारतिय नायिका प्रिति जिन्टाले उनको स्वरमा पियोरिटी रहेको भन्दै प्रशंशा गरेकी थिइन । त्यस्तै मेनुकाले सारेगमपमा भाग लिन पाउनु निकै खशीको कुरा रहेको साथै सारेगमपले यो अबसर दिएकोमा सारेगमप लाई धन्यवाद दि
नेपाली चलचित्र जगत कि पहिलो नायिका भूवन चन्दको “साइनो”
काठ्माण्डौ २ मङ्सीर । नेपाली चलचित्र जगत कि पहिलो नायिका भूवन चन्दले चलचित्र निर्माणको घोषणा गरेकी छिन । आईतवार राजधानिमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले निर्माण गर्ने घोषणा गरेकी हुन । चलचित्रको नाम "साइनो" राखिएको उनले बताईन । can i buy pyridium onlinr. पारिवारिक प्रेम कथामा तयार हुने चलचित्रमा कलाकारहरु भूवन चन्द, बसुन्धरा भुषाल, मदनदास श्रेष्ठ,नीता ढुंगाना, मिरुना मगर, शिखा तामाङ, राजा राजेन्द्र पोखरेल र नब नायकमा राज कुमार रहेका छन् । चलचित्रमा कार्यकारी निर्माता शरण थापा रहेका छन् भने चलचित्रलाई रमेश थापाले निर्देशन गर्दैछन् । चलचित्रको छायांकन सोमबारदेखि सुरु हुने जानकारी गराइएको छ ।
छैठौं पृथ्वी राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड २०७५ का मनोनयन सार्वजनिक
काठमाडौं, २ मङ्सिर । छैठौं पृथ्वी राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड २०७५ का मनोनयन सार्वजनिक भएको छ । अग्रजलाई सम्मान नयाँलाई प्रोत्साहन भन्ने मूल नारा सहित राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड २०७५ का मनोनयन सार्वजनिक गरिएको हो । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, उपत्यका समन्वय समितीले गर्दै आएको यो अवार्डको उत्कृष्ट पाँच भित्र पर्न सफल स्रष्टा र सिर्जनालाई राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मनोनयनको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । गीतसङ्गीतको क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै स्रष्टाको सम्मान, सिर्जनाको सम्मान गर्दै गीतसङ्गीतको क्षेत्रलाई सम्बद्र्धन, प्रबद्र्धन गर्दै गीतसङ्गीतमा लाग्नेहरुका लागि उर्जा प्रदान गर्नका लागि यो अवार्डको आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ । विभिन्न २५ विधा समेटेर आयोजना हुँदै आएको प्रतियोगीता मङ्सिर २९ गते शनिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजना हुने छ । यस कार्यक्रम
Nov132018 by suchanapatiNo Comments
काठमान्डौं २७, कात्तिक । हास्यकलाकार हरी बंश आचार्यले आज आफ्नो ६० औं जन्म दिन मनाएका छन । मंगलबार बिहान रेडियो अडियोको प्रांगणमा वहाँको जन्म दिन मनाईएको हो । उक्त कार्यक्रम मा हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, किरण के सी , जितु नेपाल ,सितारम कट्टेल, कुन्जना घिमिरे , दिपकराज गिरी, सन्दिप छेत्री , अभिनेत्री आँचल शर्मा , पत्रकारहरु ,चलचित्र कर्मीहरुको बाक्लै उपस्थिती थियो । नियात्रा टिभी को एक प्रश्न मा आफुले सँधै यसैगरी दर्शक श्रोताको माया पाउन सकुँ र हँसाइ रहन सकु भन्ने सन्देश दिए । how to use wellbutrin recreationally. ﻿
Oct42018 by suchanapatiNo Comments
काठमाण्डौ, १८ असोज । राष्ट्रिय लोक तथा दोहरी प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय अनामनगर समितीले "लोक संगीत बिशेष राष्ट्रिय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम २०७५ को आयोजना गर्‍यो । प्रमुख अतिथी नारायण रायमाझीको प्रमुख आतिथ्यतामा संचालन भएको उक्त कार्यक्रम "पहिलो पटक र फरक प्रयास, लोक दोहोरीमा नयाँ अभ्यास” भन्ने मुल नारा सहित नेपालीहरुको महान पर्व बडा दशैको पावन अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान सहित मनाए । प्रतियोगिता १० समुहमा रहेर संचालन भएको थियो । प्रतियाेगितामा पहिलो - दाङ समुह ,दोस्रो - ठमेल समुह ,त्रितिय - ललितपुर समुह र सान्त्वना चाबहिल समुहले नगद सहित प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । buy astepro from india.
May192018 by suchanapatiNo Comments
काठमाण्डौं,१२ जेठ । चलचित्रमा फरक प्रस्तुतिमा देखिने बिपिन कार्किको चलचित्र 'हरि' यही जेठ १८ गते देखी प्रदर्शनमा आउँदैछ । हरी जस्तै कथा बस्तुमा सँधै अभिनय गर्ने इच्छा रहेको उनले आफ्नो अन्तर्वाताका क्रममा बताए । बाँकी भिडियोमा :- ﻿ real viagra hong kong.
काठमाण्डौं,१२ जेठ । xhamster m. प्रतिभावान बालक ध्रुव बिक बाजुरा देखी काठमान्डौं आएका छन । उनको जादुमयी आवाजलाई युट्युब मा अपलोड भए पछी पी एन पी मिडियाका संचालक सन्दिप खत्रीले काठमाण्डौं ल्याएका हुन । काठमाण्डौको कपन बालुवाखानीमा अवस्थित तिरुपति बोर्डिंग स्कुलमा अध्ययन सुचारु गर्ने सन्दिप खत्रीले पत्रकार सम्मेलनमा जनाए । भिडियो सहित :- ﻿﻿
काठमान्डौं,१२ जेठ । चर्चित हाँस्यकलाकार मरिचमान श्रेष्ठ (बल्छी धुर्बे) हालै विवाह बन्धनमा बानिएका छन् । विगत लामो समयदेखि हाँस्य टेलिसिरियल (मेरी बास्सै) मा काम गर्दै आएका मरिचमान श्रेष्ठ अहिले पनि सोहि टेलिसिरियलमा व्यस्त छन् । बल्छिले लमजुङ भोटेओडारकी करुणा खड्कासँग प्रेम बिवाह गरेका हुन् । विगत ६ बर्ष देखिको लामो प्रेमलाई बिवाहमा बदलेका हुन् ।शुक्रबार काठमाण्डौको म्हेपि मन्दिरमा परम्परा अनुसार बिवाह गरेका हुन् । बल्छिले आजभन्दा ६ बर्ष अघि सिताराम कट्टेलसँग लमजुङको एक कार्यक्रममा जाँदा करुणासँग चिनजान भएको बताए । ‘कार्यक्रमको सिलसिलामा धुर्मुस दाईसँग लमजुङ जाँदा करुणसँग परिचय भयो, पछि कुराकानी हुँदै जाँदा मायाप्रेममा परियो’, बल्छिले भने । करुणाले मनमिल्ने मान्छे पाएकोमा निकै खुसी भएको बताउँछिन् । फेवाटाम्सका लागि नवराज भण्डारीसँगको रमाइलो कुराकानीमा मरिचमान श्रेष्ठ भन्छन् “हाम्रो लभ ब